Faah faahin ku saabsan dagaal ay dowladda kula wareegtay Laanta buure Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
Faah faahin ku saabsan dagaal ay dowladda kula wareegtay Laanta buure Faah faahin dheeri ah ayaa kasoo baxeysa dagaal Ciidamada dowladda KMG iyo kuwa AMISOM ay maanta kula wareegeen deegaanka Laanta-buure ee gobolka Sh/hoose.
Wararka ka imaanaya deegaanka Laanta Buure ee gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay maanta dagaal mudo kooban socday ay kula wareegeen deegaankaasi.
Sida ay ku waramayaan dadka deegaanka ah ciidamada ayaa saldhigyo ciidan ka samaystay fariisimihii ay baneeyeen Al Shabaab ee Laanta-buure kadib markii Al Shabaab ay ugu dambeyn isaga baxeen deegaanka markii looga itaal roonaaday iska horimaadka.
Saraakiil u hadashay dowladda oo uu ka mid yahay Jen. Dhegabadan ayaa u sheegay Saxaafadda inay qabsadeen deegaanka hadana qorshaha uu yahay inay horay usii socdaan ilaa magaalada Marka, iyaga oo intaasi ku daray in dagaalka ka dhacay deegaanka ay kaga dileen Al Shabaab 7 ruux sidoo kalana ay kaga qabsadeen saanad Milatari oo uu sheegay inay ka furteen Al Shabaab.
Majiro wax war ah oo ilaa hada kasoo baxay dhinaca Al Shabaab oo ku aadan la wareegitaanka deegaanka Laanto buure oo dhowr KM u jira magaalada Afgooye iyo sheegashada dowladda.